MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 1, 2018 Laisser un commentaire sur MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA
« Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » Matio 6: 6
Tena firaisana amin’Andriamanitra Ray ny vavaka. Resaka atao amin’Andriamanitra ny vavaka. Ny mba hihainoan’Andriamanitra antsika no antony hivavahantsika. Koa raha mivavaka isika aoka tsy ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, fa tsy ny tena hiresaka amin’Andriamanitra no ataony fa ny hahitan’ny olona azy:
– Mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga.
– Mivavaka eo anjoron-dalana hahitan’ny olona azy.
Mazava fa efa azony ny valimpitiany avy amin’ny olona. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin’ny efitranonao. Ao no mangina, tsy misy olona mahita izay ho afaka mamaly anao. Fa Andriamanitra, Rainao ihany no mahita anao. Izy no hamaly anao.
– Ny valimbavaka: Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka, dia nasehon’Andriamanitra taminy ny heriny. Andriamanitra izay mahita ao amin’ny mangingina no hamaly anao. Sarotra amintsika ny miandry valimbavaka indraindray. Fa aoka isika hatoky fa Andriamanitra mahalala ny hevitra hiheverana antsika. Ny Tompo Jesosy hampahery antsika.
Publié parfilazantsaramada juin 1, 2018 Publié dansUncategorized